Hlola i-Washington, Usa - World Tourism Portal
Hlola i-Washington, Usa
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eWashington, Usa
Iwebhusayithi yezokuvakasha esemthethweni yaseWashington
Bukela ividiyo ekhuluma ngeWashington
Hlola i-Washington, e-USA
Hlola iWashington DC inhloko-dolobha yase-United States of America nesihlalo samagatsha ayo amathathu kahulumeni, kanye nesifunda sikahulumeni WaseMelika Leli dolobha linokuqoqwa okungenakuqhathaniswa kwamahhala, iminyuziyamu yomphakathi kanye nezikhumbuzo eziningi ezaziswa kakhulu ezweni lonke isikhumbuzo. Ama-vistas e-National Mall phakathi kweCapitol, iWashington Monument, iWhite House, neLincoln Memorial adumile emhlabeni wonke njengezimpawu zezwe elicebe kakhulu kunawo wonke emhlabeni.
I-DC inezitolo, ukudla, kanye nokuphila ebusuku kulungele idolobha elisezingeni lomhlaba. Abahambi bazothola idolobha leli ukuba lijabulise, liqhamuke nezwe lonke.
Cishe zonke izivakashi ze-DC zithutheleka eNational Mall — indawo emide engamamayela amabili, nenhle yemvelo enezindawo eziningi zesikhumbuzo sedolobha kanye neminyuziyamu yakwaSmithsonia - kodwa idolobha ngokwalo liyidolobha elihle elivame ukungahambisani nezikhumbuzo, ipolitiki , noma izakhiwo ze-neoclassical. AbakwaSmithsona “ngeke baphuthelwe,” kodwa ungazikhohlisi — awukaze uye ku-DC uze uphume futhi uyisedolobheni.
IDowntown (The National Mall, East End, West End, Waterline)
Izindawo ezivakashelwe kakhulu: I-National Mall, isifunda esikhulu semidlalo yeshashalazi eyi-DC, iminyuziyamu yaseSmithsonia kanye nabangewona amaSmithsonia, ukudla okuhle, iChinatown, i-Capital One Arena, iCentral Centre, isifunda samabhizinisi amakhulu, iWhite House, iWest Potomac Park, iKennedy Center, iGeorge Washington University, iTidal Basin enhle, iNationalals Park, kanye neWhawf. Ipaki kaZwelonke enkabeni yedolobha, izungezwe izakhiwo ezimhlophe zikahulumeni wase-US, futhi iqukethe iqoqo lesikhumbuzo, izikhumbuzo, iminyuziyamu yamahhala, izimbali ezingama-cherry, ama-squirrels kanye namajuba.
INorth Central (iDuPont Circle, Shaw, Adams Morgan, Columbia Heights, Petworth)
Umakhelwane ka-C onobuhle kakhulu nokwehlukahlukana kwezindawo kanye nezindawo ongaya kuzo ngomculo obukhoma, ubusuku obusha, kanye nemithwalo yokudlela, iHoward University, ukuyothenga izinto zokuhlobisa izindlu, amanxusa amahle, i-Little Ethiopia, umgwaqo u-U, kanye namahhotela amahle. UShaw, obekade ebuyela emuva komakhelwane abathathu baseNorth Central, obekulokhu kuyisizinda sempilo yamasiko ase-Afrika kuleli dolobha, unokudla kwasebusuku ngokuhambisana ne-U St enikeza isixuku esidala kakhulu nesinobuhlakani obukhulu, ukudla okumangalisayo eLittle Ethiopia. ukuthenga oku-off, izindawo eziphambili zomculo ezibukhoma zedolobha, nendawo yazo yobumnandi obujabulisa kakhulu indawo yegalari eLogan Circle. I-Adams Morgan inemigoqo eminingi ngomculo obukhoma ogxile emgaqweni we-18th, izindawo zokudlela eziningana ezinhle futhi umane uyindawo enhle yokuhamba. IColumb Heights ifaka ezitolo ezinkulu zedolobha kanye nezindawo eziningi zokudlela nezindlela zokuphuza. Kanye nomakhelwane osondelene neMount Pnandi, kuyikhaya labantu abaningi bomuzi waseSalvador kanye nokudla kwabo kokunethezeka okuyisiginesha, i-pupusa. IPetworth ifaka iklasikishi lasehlobo lika-Abraham Lincoln neCarter Barron Amphitheatre kanye nokuhlanganiswa kwezitolo nezindawo zokudlela.
ENtshonalanga (Georgetown, Enyakatho Ntshonalanga)
Uhlangothi oluhlonishwayo nolunothileyo lwedolobha, ikhaya elihlala emlandweni waseGeorgetown onomdlandla wobusuku obusebenza ngobusuku, izakhiwo zamakoloni, kanye nokudlela okuhle; i-National Zoo; I-National Cathedral enkulu; i-bucolic Dumbarton Oaks; inqwaba yezitolo ezinkulu ze-DC; ngaphezulu Embassy Row; I-American University; nemichilo yokudlela eminingana emnandi. Ukwakhiwa kwamakoloni wamakoloni kanye nemigwaqo ye-cobblestone, imigoqo yezemidlalo, ukuyothenga okuphezulu kanye ne-boutique, i-bucolic Dumbarton Oaks kanye ne-Georgetown University.
IMpumalanga (iCapitol Hill, Eduze Northeast, Brookland, Anacostia)
Kusukela eCapitol Building naseThala lezincwadi leCongress, nokuthanda ukudlula esiteshini esidala seNyunyana kanye nomakhelwane ongumlando weCapitol Hill, ezindaweni ezivame ukuhanjelwa yiGallaudet neCatholic University, i-Anacostia yomlando, iDC's Vatican"Ezizungeze iNational Shrine, iNational Arboretum enkulu, iKenilworth Aquatic Gardens, impilo yasebusuku e-Atlas District, kanye nedlanzana lezinye izindawo ezingamakhosi. Isifunda esikhulu seshashalazi sase-mainhe, iminyuziyamu emikhulu ethe xaxa, izicupho eziningi zabavakashi, iDolobha Elikhulu I-Arena, Isikhungo Senkomfa, iChinatown, kanye nokudla okuhle indawo yokudlela eyi-José Andrés eyimpumelelo. Eduze naseNyakatho-mpumalanga - impilo yasebusuku ebikade ingagudluki esifundeni i-Atlas, Gallaudet University, kanye ne-National Arboretum enkulu. IBrookland - i "DC yaseVictoria" encane yase DC, ezungeze iNational Shrine ne University of Catholic. I-Anacostia - izindawo eziningi eziseMpumalanga yoMfula ziyawa ngisho nasema-radar endawo, kepha kungenza "uhambo olukhulu losuku" ukuvakashela iminyuziyamu yeFrederick Douglass neSmithsonian Anacostia kanye neKenilworth Aquatic Gardens enhle, noma ukumane uqonde kangcono ukuthi injani Umphakathi ompofu futhi onganakwa onomlando ocebile kangaka ungaba khona enhlokodolobha yezwe ecebe kakhulu emhlabeni.
Eqinisweni i-DC isenkabeni enye yezindawo ezinkulu zedolobha, nezindawo eziningi ezikhangayo njenge-Arlington Cemetery, i-Iwo Jima Memorial, isikhumulo sezindiza, iPentagon, iThempeli likaMormon lezwe indawo yokudlela, namahhotela anentela ephansi yokuthengisa angaphansi kwemingcele yedolobha — ungaphuthelwa Okuhamba phambili kweBurbs.
IWashington, DC, idolobha elithwele ezepolitiki, ngabezepolitiki, nakwezepolitiki. Kwakungeyona inhloko-dolobha yokuqala yezwe: iBaltimore, iLancaster, iYork, i-Annapolis, iTrenton, iPhiladelphia, ngisho New York City wonke aphatha uhulumeni kazwelonke. Kodwa-ke, bekucacile ukuthi inhlokodolobha yesizwe izodinga ukuzimela kohulumeni bezwe ababenamandla ngaleso sikhathi nokuthi amazwe aseningizimu ayenqaba ukwamukela inhlokodolobha enyakatho. NgoJulayi 16, 1790, iCongress yaphasisa iThe Residence Act, eyasungula ukuthi inhlokodolobha yase-US izotholakala eduze koMfula iPotomac. NgoJanuwari 24, i-1791, uMongameli uWashington wamemezela indawo ethile yedolobha elisha elingumbuso elisenyakatho yefa lakhe le-70,000-acre. Isifunda sobumbano esenziwe ngamadayimane sasiqediwe sivela emazweni aseMaryland naseVirginia futhi uhulumeni wobumbano wathenga indawo enkulu engakhiwanga ningi kubanikazi bayo. Omasipala abakhona beGeorgetown ne-Alexandria bahlala emadolobheni azimele ngaphakathi kwesiFunda esisha saseColumbia.
I-DC ihlaba umxhwele emhlabeni jikelele. Kunamanxusa amaningi e-DC kunanoma yiliphi elinye idolobha emhlabeni, abadonsa ochwepheshe bamazwe aphesheya cishe kuwo wonke amazwe emhlabeni.
IWashington, DC ihanjiswa yizikhumulo zezindiza ezintathu ezinkulu. Zonke izikhumulo zezindiza ezintathu zinikeza i-Wi-Fi engenamkhawulo.
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eWashington, e-USA
Imicimbi - imikhosi eWashington
I-DC ineqembu eliqeqeshiwe emidlalweni eyisithupha ngayinye yezemidlalo yase-US.
Izikhumbuzo zilula ukuzithola ezitobhini nasezitolo eduze naseNational Mall nase-East End. Kodwa-ke, le minikelo ivame ukuba ngophawu (izingilazi ezidutshuliwe, omantshi, izikibha, njll.). Izitolo zezipho zeminyuziyamu yakwaSmiths zineminikelo eyingqayizivele futhi ziyizindawo ezinhle zokuthenga izipho.
IMakethe yase-Eastern eCapitol Hill iyindawo oyintandokazi yangoMgqibelo noma yangeSonto ntambama yokudla okhiqizwe endaweni yangakini nezinto zobuciko. Noma ungathengi, yindawo enhle yokubhekabheka futhi udle.
Izindawo zokudlela ezinhle ze-Eclectic nezitolo zemivini kuvamile eGeorgetown, Adams Morgan, Upper Northwest nase Shaw. Noma kunjalo, amanani aphezulu; cishe ngeke uthole izindondo eziningi.
Imidwebo yobuciko miningi kulo lonke idolobha futhi yenzelwe ukuphequlula okukhulu, yize amanani entengo ephakeme.
Izitolo ezikhethekile zezincwadi zivame futhi e-DC ngenxa yeningi labantu abafundile. Kukhona futhi ezinye izinketho ezinhle eCapitol Hill nase-East End.
IWashington inakho konke kwakho konke, ukusuka ekuthatheni okuhle ngobuhlanga kuya ezindaweni ezinamandla amakhulu okubamba indawo ezokwenza ukuthi ikhadi lakho lesikweletu liqhume amalangabi.
Iningi lama-cuisine aphezulu atholakala eWest End, e-East End, eGeorgetown naseDupont Circle — elinikeza okuhlangenwe nakho kokudlela okusukela kumakamishi agcwele amasudi anamandla kuMinibar kaJose Andres.
Amazwe e-DC aphesheya angadonsela abamele kuwo wonke amagumbi omhlaba, futhi wonke adinga amakhofi nezindawo zokudlela zangaphambili ukuze zihlangane. Ukubethelwa okuphawuleka "kobuhlanga" kufaka phakathi ukudla okumnandi kwase-Etiyopiya eShaw kanye nokudla okuhle kwamaShayina kokusalayo kweChatatown okunyamalala kweDC.
Ukudla kwaseSalvador okufana ne-pupusa kuvamile eColumb Heights. Amaphaphu amaqabunga ommbila awugqinsi agxotshwe ushizi, ingulube ethosiwe, ubhontshisi ocolisisiwe, noma zonke izinhlobo zezinye izinto, bese ibekwa nge-tart iklabishi nesoso elibomvu lase-Italy.
Ukudla kwase-Itiyopiya kuyinto eyinqaba ye-DC ngenxa yomphakathi omkhulu wakuleli dolobha wase-Ethiopia. Ukudla kwase-Etiyopiya kuwukugibela okusamnyama kokudla okuphekwe ngesipayisi kanye nenyama nemifino ethosiwe emafutheni ambozwe isinkwa esise-spongy esibizwa ngokuthi i-injera. Udla izitsha ngezandla zakho, usebenzisa ipuleti elengeziwe le-injera (elifana nesinkwa) njengegama lakho “lesitsha” —khumula ucezwana lwe-injera bese ulusebenzisa ukucosha ukudla kwakho. Kufanelekile e-Ethiopia ukusebenzisa amathiphu weminwe yakho kuphela kulolu hlelo, futhi ngesizathu esihle: uzothola isidlo esingcolile ngenye indlela. Futhi kufanelekile ukondla usuku lwakho, okwenza lokhu kube ukudla okujabulisayo uma ulwazi usuku lwakho kahle. Izindawo ezingcono kakhulu zokuzama ukudla kwase-Ethiopia eziseShaw, okubandakanya i-Little Ethiopia
Into esiseduzane iDC enayo ekutholeni okuyingqayizivele kwasendaweni ngumusi oshunqisiwe: obheme inyama yenkomo, isigamu senyama yengulube. Zine- "snap" eqinile uma uluma ibe yinye, ifakwa kubhaja wenja esishisayo, futhi imvamisa ibekwa ngopelepele. Zithengiswa kakhulu ngamaloli okudla kwi-National Mall.
I-Cupcake fever e-DC igqugquzelwa yizivakashi ezibolekwe yimibukiso ye-TV enjenge-Cupcake Wars. Amabhikawozi amakhekhe kwesinye isikhathi anemigqa egijimisana nebhulokhi.
Iminyaka yokuphuza / yokuthenga esemthethweni i-21 futhi iphoqelelwa ngokuqinile kuDC Zilungiselele ukuthi ukuhlolwa kwakho kuhlolwe, noma ngabe ubonakala ungaphezulu kwe-21.
Amabha nezindawo zokudansa, eziningi zazo ezinomculo obukhoma, ziningi kanye ne-18th St e-Adams Morgan, kanye nase14th St kanye nase-U St ezindaweni eziseduzane iShaw, nase-Near Northeast, okuyizindawo eziphambili zedolobha ngokuqhubeka endaweni umshini wokuphamba Amahhotela amaningana eGeorgetown afaka imigoqo ethandwa kakhulu yasekilasini.
Amakilabhu omdanso aqoqene kakhulu e-DC aseceleni kweCloudicut Avenue eDuPont Circle. Izinhlobo zomculo ezidlalwa emakilabhini lapha zifaka i-pop, i-hip hop ne-Latin. Iningi lalawa mabha kanye namakilabhu anekhodi yokugqoka. IDuPont Circle neShaw nazo zinemigoqo / amakilabhu amaningi anakekela isixuku sezitabane.
Kunezindawo ezimbalwa zomculo we-500-1,500 zomuntu omuntu kuShaw.
I-Live jaz idume kakhulu kwi-DC Jazz legend uDuke Ellington odlalelwa njalo emakilabhini eShaw.
I-Go-go uhlobo lomculo oluhlobene ne-funk ne-hip-hop yakuqala eyasungulwa eDC kuma1960's. Amakilabhu e-go-go abekade eyindawo eyingqayizivele yobusuku ehlukile ka-DC futhi ayegxile e-Anacostia. Kodwa-ke, amakilabhu amaningi manje ayenqaba ukusingatha amabhendi agijimayo ngenxa yesibalo esimangazayo sokugwazwa nama-Homicides okwenzeka kulemicimbi. Uma ufuna ukuhamba-bukhoma, funa imicimbi emikhulu engaphandle noma ubheke eTakoma Station Tavern eduze kwaseTakoma Park, okuwukuphela kwendawo ese-DC esenezenzo ezijwayelekile zokuhamba.
Iningi labantu eWashington DC linenkululeko yenkululeko, yendawo yonke, yezwe kanye neyokuvikela imvelo ngamazinga aseMelika. Lokhu kuvikela izivakashi zasekhaya nezangaphandle ukuthi zingahambisani namasiko okungenzeka ukuthi kusondele kwenye indawo. Kodwa-ke, eminye imithetho eqinile yokuzihlonipha icishe ihlukanise eWashington DC.
Njengoba inabantu abaningi abafundile, abaqeqeshiwe nabezepolitiki, i-DC idolobha elihlelekile futhi elihlonipha imfashini. Ngisho ehlobo, ama-t-shirts kanye nama-shorts asezitolo ezimbalwa ezisezansi noma emigoqweni nasezitolo zokudlela. Kodwa-ke, uma ufuna ukujabulela ukuba izivakashi, gqoka lokho okunethezekile futhi ungakhathazeki — uzoba nabangane abalungile! Kepha uma ukhetha ukuxhuma, ukubheja okuphephile, nganoma yisiphi isikhathi sosuku, kwabesilisa kukhona ama-jean amnyama amnyama ne-un-tucked-up noma ihembe le-polo, futhi mhlawumbe ama-sneaker amnyama noma okuthile okuncane futhi okunesitayela esithe xaxa. Abesifazane bavame ukuhlangana ngokungcono ngimbhangqwana enhle yezimbadada, amabhuzu, noma ezinye izicathulo ezinhle, futhi mhlawumbe bokweqa i-T-shirt kanye nama-sneaker kusihlwa.
Ngokudla okuhle noma kweshashalazi, lindela ukugqoka kahle. Ihembe elihle futhi elingenamikhawulo kufanele libe kunoma iyiphi indawo yokudlela emnandi. Amathambo awasona isidingo, kepha izindawo zokudlela ezihlelekile kakhulu (iningi lama-steakhouse nesiFulentshi) zizodinga ukuthi amadoda agqoke amajackethi (kodwa ajwayele ukuba namajakhethi omusa wemalimboleko uma ungakhohlwa). Abesifazane bazoba kahle ngokugqoka, isiketi, noma ibhulukwe elihle.
Ukwemukelwa kwamaselula kuyatholakala kulo lonke idolobha. Uma ungafuni ukusebenzisa idatha noma ungenayo ifoni uhulumeni waseDC usebenzisa inethiwekhi yamahhala we-Wi-Fi yamahhala, yomphakathi yedolobha. I-Wi-Fi yamahhala iyatholakala nasemtatsheni wezincwadi kawonkewonke we-DC nasezitolo eziningi zekhofi zasendaweni, okuyizindawo ezinhle futhi zokuphumula. Uma udinga ukusebenzisa ikhompiyutha, imitapo yolwazi inezindawo ezikhethekile zekhompyutha. NjengaseMelika eminingi, amathofi e-Intanethi ayinto eyivelakancane.
Kuningi izindawo eziseduzane neWashington ukuvakashela.